Waare “Mooshinka wuxuu ii ahaa Canaan, waxaa diyaar u ahay inaan dhageysto dhaliilaha Xildhibaanada” | Baydhabo Online
Waare “Mooshinka wuxuu ii ahaa Canaan, waxaa diyaar u ahay inaan dhageysto dhaliilaha Xildhibaanada”
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay canaan u aheyd mooshinkii laga keenay labo cisho ka hor, isagoo ka dhawaajiyay inuu diyaar u yahay inuu dhageysto dhaliilaha ay u soo jeedinayaan Xildhibaanada Hirshabeelle.
Isagoo ka hadlayay kulan xalay ka dhacay Xarunta Madaxtooyada Hirshabeelle ee Jowhar ee lagu shaaciyay in Mooshinkii laga keenay laga laabtay ayuu sheegay in aanu marna colaadin Xildhibaanadii mooshinka ka keenay.
“Ma colaadsan man durin mooshinka sharciyadiisa iyo farsamadiisa, si gaar uma xulafeysan kuwo aan iga qorin mooshinka, iskuma dayin baarlamaanka dhexdiisa inaan ka bilaabo kala qeybin iyo kala qoqobid”ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Waxaa uu sheegay inuu eedeynta loo soo jeediyay ay tahay mid taabaneysa xaalada guud ee Hirshabeelle ku sugan tahay, isagoo xusay inuu diyaar u yahay inuu saxo wixii qaladaad ee jira.
Madaxweyne Waare ayaa soo dhoweeyay sida xilkasnimada leh ee Xildhibaanada uga laabteen Mooshinka, wixii hadda ka dambeeya uu diyaar u yahay inuu wax ka saxo qaladaadka jira.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sheegay in dadaalada lagu baajiyay mooshinka Waare ay dowladda Federaalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha qeyb ka ahaayeen.
Labo cisho ka hor ayay aheyd markii in ka badan 50 Xildhibaan ay mooshin ka keeneen Madaxweynaha Hirshabeelle oo lagu eedeeyay xil gudasho la’aan iyo in balan-qaadkii uu sameeyay markii la doortay uu waxba ka fulin waayay.